200% Nkwụnye ego Ụgwọ na Ọnọdụ | FXCC
200% Nkwụnye ego ego na ọnọdụ
Home / 200% Nkwụnye ego ego na ọnọdụ
FXCC 200% Nkwụnye ego Ụgwọ & Usoro (AHỤ)
Ị kwenyere na site na itinye òkè n'ime onyinye a ("Nye"), usoro ndị a na ọnọdụ ("Okwu") ga-ejikọ gị yana yana okwu na ọnọdụ niile metụtara akaụntụ ahịa gị. Ikwesiri igosi okwu ndi a ma jiri nlezianya mara onwe gi ngosi ngosi ngosi.
Ndị ahịa kwesịrị ekwesị:
Ndị ahịa ọhụrụ na nke dị na FXCC. Ndi jidere ihe omuma atu (XL) ma obu XL) ndi ahuru ịbanye n’ime Onyinye site na ikwuputa nkwuputa ha nke oma site n’enye ha ozi site na email na ego@fxcc.net.
Ndị ahịa anaghị etinye aka na nkwalite ọ bụla ọzọ na FXCC.
leverage: Ihe kachasị emetuta nke Akaụntụ na-ekere òkè na nkwalite a bụ 1: 100
Ebe E Kwesịrị Ekwesị: Ọrụ ego na-agbakwunye ego ọhụrụ na obere ego Client Client kwụrụ ụgwọ site na ịkwụ ụgwọ FXCC nyere ma mesịa zigara ya na akaụntụ ahịa Client Eligible. Ndozi nguzozi, iwepu ego nke diri ma gha ezigakwa ya ozo, ego ntinye ma obu onye isi ego adighi ego ozo.
200% Nkwụnye ego ego: Maka ego ọ bụla ruru eru nke ndị ahịa ruru eru mebere na akaụntụ azụmaahịa ha na FXCC n’oge nkwalite ndị ahịa Kwesịrị inweta Ndị ahịa ga-enweta ntanetị ego 200% n'ime oge iri abụọ na anọ (24) mgbe arụchara ego ahụ. (Ntinye ego kacha nta dị n'okpuru ụdị akaụntụ ahụ na ọnọdụ)
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ego niile: The kacha ọnụ ọgụgụ niile FXCC kwetara na onye ọ bụla na-enwerịrị ike inweta n'oge ọ bụla enweghị ike karịa ngụkọta nke $ 10,000 US (ma ọ bụ otu).
Ihe A A
Onye ahịa 'A' mere nkwụnye ego ọhụrụ nke $ 1,500 ▶ Client 'A' ga-enweta ụgwọ $ 3,000 dị ka 200% Deposit Bonus; Nke a ego ga-atụgharị uche na akaụntụ ndị ahịa dị ka ndị a:
Balance Equity Ebe E Si Nweta (Ụdị E Nwere) E Nwere (Free) Mpaghara
Mgbe ahụ, Client 'A' mere ego ọzọ $ 2,000 ▶ Client 'A' ga-enweta ụgwọ ego $ 4,000 ka 200% Deposit Bonus
Nke a ego ga-atụgharị uche na akaụntụ ndị ahịa dị ka ndị a:
Ihe atụ B
'B' nke onye ahịa mere nkwụnye ego ọhụrụ nke $ 3,000 ▶ Client 'B' ga-enweta ụgwọ $ 6,000 dịka 200% Deposit Bonus. Nke a ego ga-atụgharị uche na akaụntụ ndị ahịa dị ka ndị a:
Mgbe ahụ, Client 'B' mere nkwụnye ego nke $ 2,500 ▶ Client 'B' ga-enweta naanị ikikere 4,000 n'ihi na ọnụ ọgụgụ kachasị oke nke ego ezumike bụ $ 10,000 Nke a ga-atụle uche akaụntụ ndị ahịa dị ka ndị a:
Max Total Bonus price can not exceed $ 10,000
FXCC nwere ikikere ịjụ arịrịọ ọ bụla nke Bonus na naanị ya, n'enweghị mkpa ịnye ihe ziri ezi ma ọ bụ ịkọwa ihe mere ọ ga-eji dị otú a.
A ga-atụnye bonus na akaụntụ ahịa ahia nke onye ahịa kwesịrị ekwesị, dị ka ụgwọ, Ebumnuche nke Bonus maka naanị maka atụmatụ ahịa ma ọ gaghị efu.
Dabere na akaụntụ ahịa onye ahịa Eligible na / ma ọ bụ nnyefe ya n'ime akaụntụ ahịa ahịa Client Kwesịrị ya na obere akpa ya, ga-eme ka ego a na-akagbu ma wepụ ya kpamkpam.
Client 'C' nwere nhazi nke a dị na akaụntụ ya:
Onye ahịa 'C' rịọla ka ewepu $ 1,000 $ bonus natara ego ga-akagbu ma kpochapụ kpamkpam.
Nke a ga-atụgharị uche na akaụntụ ndị ahịa dị ka ndị a:
Onye ahịa ‘C’ arịọọla ka ewepu ego zuru ezu ($ 2,500) bonus Ego ga-anata ego ga-akagbuola onwe ya ma wepu ya kpamkpam.
Cashback: Akwụsị ụgwọ ego ka a ga - akwụ ụgwọ ma bụrụ nke a ga - ewepụ ya na nkwụsịtụ ozugbo mgbe ọ bụla mechiri ọ bụla ahịa n'agbanyeghị ọkwa ahia na dịka paragraf (11) dị n'okpuru ebe a.
Igbu nke 1 ihe nlele nke otutu gbaa gburugburu ga-ebufe ego $ 1.0 (ma ọ bụ ihe nhata) site na Credit Bonus iji wepụ Balance
Onye 'Cl' na Client nwere nghazi ndị a dị na akaụntụ ahịa ya:
Onye ahịa 'D' gbanwere otu azụmahịa zuru ezu nke 1 ọkwa EURUSD (dịka meghere ma mechie), na uru nke $ 100 ▶ Nke a gbakwunyere ihe ndenye abụọ a n'ime akụkọ ihe mere eme:
Ebe E Si Nweta - $ 1.0 (ya bụ, ego a na-akwụ ụgwọ si n'aka Ebe E Si Nweta)
Bonus Deposit $ 1.0 ( ntụgharị ego ego a gbanwere ghọọ ezigbo ego ma gbakwunye na njikwa akaụntụ). E gosipụtara na njikwa akaụntụ dị ka ndị a:
Enwere ike iji ego eji eme ihe dị ka ego azụmaahịa ma ga-adị na akaụntụ ahịa Ụbọchị 50 ụbọchị kalenda ebe ọ bụ na ụbọchị natara Bonus ("oge kwesịrị ekwesị"). Mgbe ụbọchị a gasịrị, a ga-ewepụ ego ọ bụla fọdụrụ na Bonus na akaụntụ ahụ.
N'ime oge kwesiri ike ma ọ bụrụ na njirimara akaụntụ nke onye ahịa (gụnyere ego na ego furu efu) ruru ọkwa dị nhata ma ọ bụ n'okpuru 30% nke Ebe E Si Nweta Ụgwọ (dịka okwu ọzọ: ịkwụ ụgwọ nke akaụntụ ruru ọkwa dị nhata ma ọ bụ n'okpuru 130% nke ezigbo ego akwụ ụgwọ), a ga-ewepụ ego ego Ụgwọ ego dị mma a na-ewepụ (ego akwụmụgwọ), echekwara na "Akaụntụ Nchekwa" dị iche iche ma a ga-eji ya kwụọ ụgwọ Onye Ahịa E Kwesịrị Ekwesị maka ọrụ ọ bụla ọzọ a kwụrụ na ngụkọta nke akaụntụ ahụ dị ka paragraf 10 ruo mgbe njedebe nke oge ruru eru.
- 30% nke ezigbo ego (akwụmụgwọ) = $ 600
Echere na ndị ahịa 'D' nwere azụmahịa na-emeghe nke 1 lot EURUSD na efu efu nke $ 400, nke a pụtara ▶ Balance + uru & ọnwụ efu - $ 1,000 - $ 400 = $ 600
N'okwu a, a ga-ewepụ ego ahụ kpamkpam ma ọ ga-atụgharị uche na akaụntụ ahụ dị ka ndị a:
$ 1,000 $ 600 $0 Enweghị Ngalaba Agbanwe
Maka ndị ahịa ugbu a na nke n'ọdịnihu n'oge oge ruru eru, onye ahịa ahụ ga-enweta nkwụnye ego nke $ 1.0 site na nza nke a ga-esi na akaụntụ nchekwa.
- N'ihi ọnọdụ ahịa na-adịghị mma nke nwere ike ịnọgidesi ike, ọ nwere ike ọ gaghị adị mfe mgbe niile iwepụ Bonus (akwụmụgwọ) kpọmkwem na 30%.
- Ụdị ọkwa oku dị oke aka ga-anọgide na-enwe mmetụta n'oge ọ bụla ma ọ bụrụ na akwụmụgwọ ka dị na akaụntụ onye ahịa ma ọ bụ.
FXCC agaghị enwe ụgwọ maka oku ọ bụla ma ọ bụ ọnyà ndị Onye Nlekọta nwere ike ịta ahụhụ, gụnyere, ma ọ bụghị naanị na ihe nkwụsị n'ihi Nkwụsị Nkwụsị, ma ọ bụrụ na Akwụpụrụ Bonus maka ihe ọ bụla na-agbaso Usoro na Ọnọdụ ndị dị n'ime ebe a.
FXCC nwere ikike, na njikwa ya naanị, iji mee ka onye ọ bụla ghara imebi Iwu ahụ na / ma ọ bụ ihe ọ bụla nke FXCC Okwu na Iwu.
Ngosipụta ọ bụla nke nhazi ma ọ bụ ụdị ọrụ aghụghọ ọ bụla ma ọ bụ nke aghụghọ ọ bụla na akaụntụ ahịa ahịa ọ bụla ma ọ bụ na ejikọta ya ma ọ bụ ejikọta ya na Bonus Credit ga-eme ka ihe ndị ahụ niile mebie.
Mmegha ọ bụla, nkọwahie nke Usoro na Ọnọdụ ndị dị n'elu dịka ma ọ bụ ọnọdụ bilitere na nke a na-ejighị Iwu na Ọnọdụ ndị a kpuchie, ụdị FXCC ga-edozi esemokwu ma ọ bụ nkọwahie dịka ọ na-ewere dị ka onye kachasị mma nye ndị niile metụtara ya. Mkpebi ahụ ga - abụ nke ikpeazụ na / ma ọ bụ na - emegide ndị niile na - abata. Agaghị abanye akwụkwọ.
FXCC nwere ikike, ebe ọ bụ na naanị ya nwere ike iche na ọ dị mma, ịgbanwe, gbanwee, kwụsị, kwụsị ma ọ bụ kwụsị Offer, ma ọ bụ akụkụ ọ bụla nke Offer, n'oge ọ bụla site na ịnye gị ọkwa site na ozi ederede site na Ụlọ Ahịa Online, ma ọ bụ site na ozi-e ma ọ bụ site na itinye ọkwa na Websaịtị anyị. Anyị ga-agba mbọ inye gị ma ọ dịkarịa ala atọ (3) Business Business na-ahụ maka mgbanwe ndị a ọ gwụla ma ọ bụ ihe na-adịghị mma ka anyị mee.
A ga-emeso onye ahịa ahụ dịka ịnakwere mgbanwe ahụ ma ọ bụrụ na Onye Ọrụ ahụ agwa Ụlọọrụ ahụ na Onye Ọrụ ahụ anabataghị mgbanwe na ọchịchọ ịkagbu onyinye ahụ. Onye ahịa ahụ agaghị akwụ ụgwọ ọ bụla maka ịkwụsị na nke a, ọzọ karịa ụgwọ akwụ ụgwọ ma kwụọ ụgwọ maka Ọrụ nyere ruo mgbe ahụ.
Ọ nweghị ọnọdụ ọ bụla FXCC ga-akwụ ụgwọ maka ihe ọ bụla ọ bụla gbanwere, ngbanwe, nkwusioru, nhichapụ ma ọ bụ nkwụsị nke Nkwado.
Haziri Central Clearing Ltd, Iwu Onye Mmekọ Iwu, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu ma dị ndị ahịa bi na mpaghara na-abụghị nke European.
Ndị ahịa kwesịrị ijikwa akaụntụ ahịa ha kwekọrọ na ọkwa nkasi obi ha. Enweghi mgbasa ozi nkwado iji gbanwee ma ọ bụ gbanwee mmasị ndị ọkachamara ma ọ bụ gbaa ndị ahịa ume ịzụ ahịa n'ụzọ na-ekwekọghị na atụmatụ ọnụọgụ ndị ahịa.
A na-ere ahịa FXCC n'akụkụ oke, nke na-eburu nnukwu ihe ize ndụ na nke nwere ike ghara ịkwado ndị ahịa niile. Tupu ị na-ahọrọ ịzụ ahịa FXCC, ndị ahịa kwesịrị nlezianya tụlee ihe mgbaru ọsọ ha, njikwa ahụmahụ, na agụụ ihe ize ndụ. Ọ ga-ekwe omume ịkwapụ ihe karịrị ego mbụ gị. Ndị ahịa ekwesịghị ịhapụ ihe ịchọrọ ụdị ahịa ha ka ha wee nwee ike ịjụọ ahịa ahịa kachasị dị mkpa achọrọ na Usoro na Ọnọdụ ndị a.
Icheghị ịgbaso Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-eme ka onye ahịa bụrụ onye na-erughị maka onyinye ahụ. Otú ọ dị, enweghị ike inwe mmetụta na ikike nke onye ahịa nwere ike ịzụ ahịa na FXCC trading platform na ọ dịghị ụzọ na-ekpughe ndị ahịa na ihe ize ndụ ma ọ bụ ikpughe ahịa.
Usoro na Usoro a anaghị egosipụta ihe ize ndụ niile metụtara na itinye ego na FXCC ngwaahịa. Ndị ahịa kwesịrị nlezianya nyochaa Agreement FXCC Agreement na Nkwupụta Nkwupụta Egwu na nkwupụta zuru oke tupu ha ekpebie ịmepe akaụntụ na FXCC ma tụlee ihe ize ndụ ndị a kọwara na ihe onye ọ bụla na-emefu ego ya na ọnọdụ ego iji chọpụta ma ego dị otú ahụ ọ dị ha mma. Ihe nkwekọrịta na nkwupụta egwu dị na FXCC website na www.fxcc.com
(Ụdị 2.1 - emelitere ikpeazụ: Eprel 2020)